Anyị nwere onye ahịa nke anyị tụrụ aro Piwik. Ha na-abanye n'ime ụfọdụ nsogbu akụkọ na-akpata ma Google Analytics yana ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ nchịkọta n'ihi ụda ndị ọbịa ha na-abanye na saịtị ha. Nnukwu saịtị amataghị na ha abụọ dị nsogbu nkwụsị na njedebe data ya na Google Analytics.
Ọ bụrụ na Google Analytics na-egbochi gị, Piwik nwere ike ịbụ nnukwu ihe ọzọ Obodo Piwik mbipụta bụ ihe mepere emepe nchịkọta ngwá ọrụ nke na-abịa na mmelite oge niile na ọhụụ ọhụrụ maka n'efu. Piwik PRO Na-ogige na-agụnye a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ adịchaghị atụmatụ na ọrụ. Piwik PRO na-enyekwa a ngwọta igwe ojii (ebe ị ka nwere data ahụ) ma ọ bụrụ na ịnweghị ịkwado ya n'ime. Piwik nwere ihe zuru ezu tụnyere nke ọ bụla ngwọta na saịtị ha.
Tags: ọzọ na nchịkọta googlenchịkọta apidata nchịkọtammachi nchịkọtanchịkọta nchịkọtaon-premise nchịkọtaPiwikigwe ojii piwikobodo piwikpiwik propiwik vesos gapiwik na google analyticspiwik vs gapiwik na google nchịkọtaezigbo oge nchịkọtanyocha nyocha ọcha